မွေးကင်းစဗတ္တိဇံကယ်တင်ခြင်းကိုကာကွယ် | Apg29
436 online! | Sidvisningar idag:3959 | Igår: 248 666 |
ဤဆောင်းပါး၌ငါမွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံအန္တရာယ်များတဲ့ယူဖောက်ပြန်ကိုလည်းယူဖောက်ပြန်သည်, အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဗတ္တိဇံကိုကလေးများနှင့်အသင်းတော်ကိုဤသို့ "အဖွဲ့ဝင်များ" ရှိနေသောကြောင့်သူတို့ကခရစ်ယာန်တွေခဲ့ကြပြီ lulled ခဲ့ကြသောကြောင့်, များစွာသောခွငျးတညျးဟူသောကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီ။
ဗတ္တိဇံကို font ကို
သူတို့ဗတ္တိဇံတခြားနေရာအသင်းတော်အတွက်ထက်ကျင်းပမရနိုင်သည်ကိုကျင်းပခဲ့ကြောင့် Constantinople အတွက်အထွေထွေ Synod ရာနှစ် 680 ၌ရှိ၏။ ယခုအခါပုံမှန်အတိုင်း (အစဉ်အလာ) ဖွစျကွောငျးကိုမွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံအားဖြင့်ဒါကြောင့်ဒီတစ် font ကိုဖွင့်ဆန့်။
ဒါဟာမတစ်ခုတည်းဆွီဒင်သားသမီး (ကျနော်၏သိသော) ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ဗတ္တိဇံကိုကလေးများဖြစ်လာကြပြီမှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစားဖြစ်လာသည် ရောနှော ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကလေးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရေအနည်းငယ်တာကတော့နှင့်ဗတ္တိဇံတရားကြောင့်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဗတ္တိဇံနှစ်ပြီးသောကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ လူအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မျက်စိကန်း။
ဒါဟာသူတို့ပဲသားသမီးသူတို့ကိုဗတ္တိဇံပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မသိမ်းရသေးသောလူကလေးများအခါသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူတို့ကလုပ်သင့်သောအခြားမသိမ်းရသေးသောဆွေမျိုးသားချင်းများကနေအပေါ်ဖိအား။ "လာတဲ့အခါသင်ကလေးဗတ္တိဇံသလဲ?" အဘိုးအဘွားသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံဒီနေရာမှာမြင် မိုက်စေသော အသက်ရှင်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း။
ပထမဦးစွာတပည့် - ဗတ္တိဇံကတည်းက
ထို့ကြောင့် သွား. လူမျိုးအပေါင်းတို့၏တပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ခမည်းတော်နှင့်သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုသူတို့ကို။ (မဿဲ 28:19) ။
ယရှေုသညျသူတို့ကိုဗတ္တိဇံ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့ သွား. လူမျိုးအပေါင်းတို့၏တပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုမှာထားတော်မူ။ ပထမဦးစွာတပည့် - ဗတ္တိဇံကတည်းက။
အခြားသောအရပ်၌, ယရှေုသညျ ယုံကြည်. ဗတ္တိဇံကိုသူကပြောပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Rename ယုံကြည်ပါတယ်။
ပတေရုသညျနောငျတရအပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုကြကုန်အံ့ဟုဆိုသည်။ ဗတ္တိဇံကတည်းကပထမဦးစွာပြောင်းလဲခြင်း။ အဲဒီမှာပိုပြီးကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးတဦးယုံကြည်သင့်ပါတယ်, ပြီးတော့သင်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဤကျမ်းစာ၌ကြည့်ရှုပါ။
ဗတ္တိဇံတရားကိုဘယ်တော့မှဟောင်းယုံကြည်ခြင်းအားမည်။ သငျ့လျြောသောအမိန့်ရှိပါရှိရပါမည်။ ဗတ္တိဇံတရားလည်းဘယ်တော့မှကတပည့မီကမည်။ တပည့်ဆိုတာဘာလဲ? ယရှေုသညျအောက်ပါအတိုင်းသူလည်းရှိ၏။ ယရှေုသညျဗတ္တိဇံကိုကျနော်တို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြ, ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သခင်ယေရှုနောက်သို့မလိုက်ကြဘူးသောသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုမရနိုင်ပါ။
ဒါဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ခွင့်ပြုသူကိုရွေးနှုတ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောခံရဖို့မသင့်ကိုဗတ္တိဇံပေး၏။ အဘယ်သူမျှမဗတ္တိဇံသင်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ သငျသညျယုံကွညျခွငျးကိုမဖွင့်ထားဖို့လိုကျသောအခါဗတ္တိဇံတရားသည်အသင်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင့်ကိုယ်သင်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြကုန်အံ့နိုငျသညျ, ယရှေုကိုယုံကြည်ရမည်။
ဗတ္တိဇံတရားသည်အနောက်မှအမှန်တကယ်လုပ်ရပ်, စာရွက်စာတမ်းသင်နှင့်မယုံကြည်ခြင်းကိုကယ်တင်သော။ ဆိုလိုပေ, သင်တို့ကိုကယ်တင်မယ်လို့ ဒါကြောင့်မယုံကြည်ပါဘူးသူတစ်ဦးကိုဗတ္တိဇံမှားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီမယုံကြည်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်, တကယ်မရှိဗတ္တိဇံထိုကဲ့သို့သောအရာဖြစ်၏။
ဒါကြောင့်မွေးကင်းစဗတ္တိဇံကိုမှကျမ်းစာနှင့်မညီခြင်းနှင့်မှားယွင်းသည်။ သူတို့ကမယုံကြည်ကြဘူးသေးသညျယရှေုများအတွက်ရပ်တည်ချက်ယူကြပြီမဟုတ်။ သင်ကလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မဲ့င်ဤသူငယ်ကိုကယ်တင်ဤသူငယ်ကိုဗတ္တိဇံ။ အဘယ်သူမျှမဗတ္တိဇံမည်သူမဆိုကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
အဘယ်မှာရှိဗတ္တိဇံကိုကလေးကမျြးစာတှငျမရှိဥပမာအားရှိပါတယ်။ သို့သော်သူတို့ကကျမ်းစာထဲမှာဥပမာရှိပါတယ် ကြသည်မဟုတ် သားသမီးဗတ္တိဇံကို။
သူတို့က သူငယ်ဆောင်ခဲ့ခဲ့ကြသည် သူ့ကိုသူတို့ကိုမထိရန်အဘို့အယေရှုအား။ သို့သော်ထိုတပည့်သူတို့ကိုဆုံးမတျောမူ။ ယရှေုသညျဤအကိုမြင်သောအခါသူဒေါသဖြစ်လာပြီးကလညျး: "အမြိုးသားအငါ့ထံသို့လာပါစေနဲ့သူတို့ကိုမမြစ်တား။ ။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်ဘို့ငါဆိုသညျ, ကလေးတစ်ဦးကဝင်ရောက်ဘယ်တော့မှတူဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မခံမယူသောသူမည်သည်ကား" ထိုမင်းသည်, သူ၏လက်နက်၌သူတို့ကိုချီသူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်နှင့်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ (မာကု 10: 13-16) ။
ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ကယရှေုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေသူ့ကိုရန်လာသောအခါသူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲ သူကသူတို့ကိုဗတ္တိဇံကို? နံပါတျ ယရှေုသညျသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ သို့သော်ထိုသို့ငါတို့သည်သူတို့ကိုဗတ္တိဇံမပေးကြပါလျှင်အမြိုးသားအယေရှုအားလာရန်ရပ်တန့်မခဲ့သနည်း လုံးဝမထားဘူး။
တပည့်အမြိုးသားအယေရှုအားလာရန်ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ယရှေုသညျပြင်းပြင်းထန်ထန်ပည့်တော်တို့ကိုဆုံးမ, သူတို့သည်အထံတော်သို့လာရန်အမြိုးသားအမတားဆီးနိုင်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
ထိုသို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့သညျယရှေုခဲ့သလဲ သူသညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောကိုလကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းသူကဆိုသည်။ သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောသို့အရနိုင်အောင်သူကအရှင်လေးတွေမအမည်ရှိသော။ သငျသညျဗတ္တိဇံကိုခံသဖြင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်နိုင်လိမ့်မယ်။ သင်ကလက်ခံရရှိသဖြင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်မည်!
ယရှေုသညျအမြိုးသားအဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်ဒီနေရာမှာမပြောပါဘူးသတိပြုပါ။ သူသညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကခံယူဖို့လိုအပ်သောအရာကိုရနိုင်သည်။ အကြောင်းမူကား, ဒါကြောင့်လူအားလုံးနှငျ့အတူရှိ၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့ဆီသို့ပိုငျဆိုငျသျောလညျးသငျလကျခံကွရမညျ။ ထိုအခါသင်သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်။
ယရှေုသညျသူ၏လက်နက်သို့အမြိုးသားအကို ယူ. သူတို့အပျေါမှာမိမိလက်ကိုအားမရသဖြင့်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ သူကသူတို့ကိုအမည်ရှိသော, ဒါပေမဲ့သူကသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ မွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံသညျယရှေုကျွန်တော်တို့ကိုလုပျခငျြတမကျမ်းစာ၌ခဲ့လျှင်, ထိုသူသည်ငါတို့သူ့ကိုအတိုင်းလိုက်နာတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကို၏လမ်းကိုပြသပေးဖို့ကဒီမှာအမြိုးသားအဗတ္တိဇံကိုခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်အစား, သူသည်နောက်မွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံတရားပြသ, ပြီးတော့ငါတို့သည်လည်းမသင့်သည်။ ဒီကတကယ်တော့ကျနော်တို့ဗတ္တိဇံသိရသည်မဖြစ်သင့်တဲ့အားကြီးသောအငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့နာမည်ကလေးများယေရှုအားလာရန်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သူတို့ဗတ္တိဇံ salvific ကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့်တည်း။
ဗတ္တိဇံ salvific မဟုတ်သောကြောင့်, ထို့နောက်ကယျတငျခွငျးအတှကျသညျယရှေုလာရန်အမြိုးသားအတားဆီး။
သူတို့က ", replied ယုံ သင်နှင့်သင့်မိသားစုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သခင်ယေရှုခရစ်၌။ " (:3တမန်တော် 16) ။
ပေါလုကသူသညျယရှေုကိုယုံကြည်လိမ့်မယ်လို့သူကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မိမိအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိုထောင်မှူးကပြောသည်။ ထိုအခါသူတို့ကမိမိတို့ကိုယ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြကုန်အံ့။ ဒီကျမ်းအမြိုးသားတို့ထောင်မှူး၏အိမျ၌ဗတ္တိဇံကိုမခံတစ်ဦးအားကြီးသောသက်သေအထောက်အထားပါ!
Paulus သူတို့ထင်သွားမည်ဟုဆိုသည်နှင့်ကလေးတစ်ဦးနာမည်ဆိုးယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပေါလုကသူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့, နှင့်မွေးကင်းစထိုကဲ့သို့သောဆုံးမဩဝါဒကိုနားလညျနိုငျပါဘူး။
တစျဖနျ: သင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲဗတ္တိဇံအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ သငျသညျယုံကွညျရမညျဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မမှန်ကန်တဲ့ဗတ္တိဇံ။
တဖန်သင်တို့အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအဘို့အသငျသညျကိုယျတျောကိုပညာရှိစေနိုငျသောကလေးဘဝမှသန့်ရှင်းသောဘုရားကမျြးစာကိုသိ ယုံကြည်ခြင်းအား ခရစ်တော်ယေရှု၌။ (2 တိမောသေ 3:15) ။
ဤတွင်ရှင်ပေါလုငယ်စဉ်ကလေးဘဝကျမ်းစာရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူကတည်းကအကျွမ်းတဝင်တိမောသေဖို့ကပြောပါတယ်။ သူကကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုမှသူ့ကိုအကြောင်းဘာမှမဖော်ပြထားတယ်။ သူသည်မိမိငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းဖော်ပြထားကြောင့်နေရာလေးကိုခဲ့ကြပေသည်။ သူကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုမခံသောကြောင့်သူသည်မိမိငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ဗတ္တိဇံအကြောင်းဘာမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါအကြောင်းပြချက်!
မယုံကြည်သောသူကိုယောက်ျားသည်မိန်းမသည်သူ၏မယားတဆင့်ကိုသန့်ရှင်းစေ၏, မယုံပါဘူးသူကဇနီးသူမ၏ယုံကြည်ခင်ပွန်းကတဆင့်ကိုသန့်ရှင်းစေသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်တို့၏သားသမီးတို့၌မစင်ကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်, သို့သော်ယခုသူတို့အဘို့သန့်ရှင်းဖြစ်ကြသည်။ (1 ကောရိန္သု 7:14) ။
ဒီကျမ်းအမြိုးသားအဗတ္တိဇံကိုမခံတစ်ဦးအားကြီးသောသက်သေခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတဦးတည်းသောမိဘကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြသည်ထိုသူငယ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးယုံကြည်မိဘတရှိပါတယ်သက်သက်သာကြောင့်ကလေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူစင်ကြယ်လိမ့်မှဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါကဲ့သို့အကိန်းဂဏန်းယခုလည်းဗတ္တိဇံတတ်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ဤသည်ကိုယျခန်ဓာအမှိုက်မှစင်ကြယ်အောင် ပြု. ကြောင်းဆိုလိုပေမယ်သညျယရှေုခရစျ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားတောင်းပန်လျက်, စင်ကြယ်သောသြတ္တပ္ပစိတ်မထားဘူး။ (1 ပေတရု 3:21) ။
ငါ၏အသားယောလသေဆုံးသောအခါသူ့ကိုnöddöpaမယ်လို့လျှင်ခရစ်ယန်ဂိုဏ်းသင်းအုပ်ကိုမေးခဲ့တယ်။ ဤသည်ဗတ္တိဇံကိုမကယ်တင်နိုင်သောကြောင့်, ငါမလုပ်ခဲ့ဘူးသို့သော်လည်းလူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဗတ္တိဇံတရားကိုသင်မကယ်တင်နှင့်ဗတ္တိဇံတရားကိုသင်တစ်ခုခုကိုမဆေးကြောတော်မူ၏။ ရေမရှိသောသင်သည်သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်မြေဆီလွှာ, မြေမှုန့်နှင့်အခြားအပျက်အစီးများမှ, ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှအပြစ်တရား၏လက်မှ။ ဒါဟာအပြစ်မှသန့်ရှင်းသောသငျသညျကိုလျှော်နိုငျကွောငျးသညျယရှေုကိုသာအသွေးဖြစ်၏။
သငျသညျယရှေုကိုကိုလက်ခံရရှိသဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်လာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ သငျသညျဗတ္တိဇံကိုခံသဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ပါဘူး။ ဤသူသည်ငါတစ်ခါတစ်ရံနာမည်မှာယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်ကြားရကြပြီ။ "အခုသူသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ " ဒါကမုသားနှင့်ယူဖောက်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအစကလေးယခုဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောသို့ရောကျပါပွီမယ်လို့နည်းတူအများကြီးယူဖောက်ပြန်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုဗတ္တိဇံအားဖြင့်မဝင်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဦးမည်သာလက်ခံသဖြင့်သို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့။ ထိုမင်းသည်သေးကမှစိတ်ထဲတွင်လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျားကြောင့်ကလေးမပွုနိုငျရရှိကြသည်။
နောက်ထပ်ယူဖောက်ပြန်အမြိုးသားအဗတ္တိဇံမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ခံယူမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခွငျးအားဖွငျ့ရပါမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်ခြင်းအရာသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားလက်ခံရရှိလူအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
သငျသညျယရှေုကိုယုံကြည်တော်ရှေ့မှာထို့အပြင်သင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်မခံမယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါတခုမွေးကင်းစကလေးနာမည်ဆိုးသေးယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသူသေးမှတစ်သိန်းမရှိသေးပါဘူးကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်ကတည်းက။
သငျသညျဗတ္တိဇံကိုကလေးများကတဆင့်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်။ သငျသညျယရှေုကိုယုံကြည်သဖြင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြကုန်အံ့။ အသငျးတျောကိုနောင်တမှတဆင့်ပင်တေကုတ္တေ၏သောနေ့၌ 3000 တိုးပွားလာခြင်းနှင့်မိမိကိုမိမိဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ခွင့်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ အသငျးတျောကိုနောင်တမယူနှစျခွငျးအားဖွငျ့တိုးမြှင့်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ယဇ်ပုရောဟိတ်သားသမီးရဲ့မိဘများအားမိန့်တော်မူ၏ဒါကြောင့်လာတဲ့အခါကလေးတွေကိုသူတို့ကကလေးခရစ်ယာန်ပြုစုမည်ကြောင်း (များသောအားဖြင့်တွဲပြီးအသက်ရှင်တော်မူသည်သူ) အသင်းတော်၌ဗတ္တိဇံကိုနေကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်များသောအားဖြင့်ခရစ်ယာန်များသည်မဟုတ်သောအခါမူကားအဘယ်သို့သူတို့ကလေးကိုခရစ်ယာန်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်? တစ်ခုခုကြောင့်ကြီးမြတ်လျှို့ဝှက်ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့မှိုင်းတိုက်ပါပဲ။
မာတင်လူသာသားသမီးဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်ကတည်းကအချို့ကလည်း, ဤညွှန်ကြားချက်မှကန့်ကွက်လိမ့်မည်။ ဟုတ်တယ်သူကကိုပြု၏, သို့သော်မိမိအပိုကောင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သူမာတင်လူသာ၏အသင်းတော်ကိုတရားအတွက်ရေးသားခဲ့သည်အဘယျသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အဖတ်ရန်:
တဦးတည်းရှိသောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ဦးဗတ္တိဇံကိုမပြုလုပ်သင့် ဗတ္တိဇံကိုယ်တိုင်က၏ခံယူမည်သူမဆိုအပြစ်လွှတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်ကသာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားယုံကြည်ခြင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာခံမှုစေသည်။ ထို့ကြောင့်သောငါ၏သစ္စာစောင့်သောအကြံဥာဏ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သင်တိုင်းမွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံကိုရပ်တန့်သင့်တယ် ကျွန်တော်တို့အနတ္တမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောနှင့်မိုက်မဲခြင်းနှင့်အတူမကျင့်သောကြောင့်ဘုရားသခင့်ထောမနာတန်ခိုးအာနုဘော်ကဲ့ရဲ့နှင့်ကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်။ (မာတင်လူသာ၏အသင်းတော်ကိုတရား။ )
အခုတော့သူတစ်ဦးဦးကဗတ္တိဇံအားကန့်ကွက်ခြင်းငှါဟောငျးပဋိညာဉ်အချိန်အတွက်အရေဖျားလှီးထားတဲ့ extension တခုဖြစ်တယ်။ အဘယ်သူမျှမ, ဗတ္တိဇံတရားမျှ extension တခုဖြစ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်အစားအရေဖျားလှီး၏။ ထိုအခါအဲဒါကိုသူတို့ကအသက်ရှစ်ရက်မြောက်သောအခါအရေဖျားလှီးခဲ့ကြတဲ့သူပဲယောက်ျားလေးများကွောငျ့, ဗတ္တိဇံကိုနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်သူတစ်ဦးတည်းသောယောက်ျားလေးဆိုလိုပေသည်။
ထို့အပွငျ, အရေဖျားလှီးဘုရားသခင်နှင့်အတူပဋိညာဉ်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံပဋိညာဉ်နိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီမှားယွင်းတဲ့အတွေးနှင့်မွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံတရားဝင်ဖို့ Press ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
ပတေရုသသည်သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါဒါကြောင့်နောင်တရနှငျ့ယရှေုခရစျ၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရ "ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ တဖန်သင်တို့လက်ဆောင်အဖြစ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ (တမန်တော် 2:38) ။
ဒါကြောင့်သူတို့ကပြုပါလိမ့်မယ်အရာနှစ်ခုပဲ။ 1. နောင်တ။ 2. ဗတ္တိဇံ။
အပြစ်များ 1. ခွင့်လွှတ်ခြင်း: ဒါဟာသူတို့ရလိမ့်မယ်, ဤအရာနှစ်ခုပဲ။ 2. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားလက်ဆောင်အဖြစ်။
အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ ကျနော်တို့ကရှုပ်ထွေးမနေသင့်။ ကျနော်တို့ကရှုပ်ထွေးကျွန်တော်သူတို့သည်ငါတို့သွန်သင်ချက်နဲ့လိုက်နာကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့က hard ကျမ်းစာ၌ပါရှိအခြို့သောအရာတို့ကိုရှင်းပြဖို့တွေ့လိမ့်မည်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူ့အယူဝါဒပါစေ။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ကမျြးခကျြကိုဖျက်ဖို့ရှိသည်။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ကျမ်းစာလာသည်ဖတ်, ထို့နောက်ကျွန်တော်ဘာမှရှေ့နောက်မစရာမလိုပေ။ ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌, ထို့နောက်ငါတို့သည်လည်းကျမ်းစာ၌ပါကတိတော်အဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘာလုပ်ကြဘူး။
Det vara att hårdra det. Om detta stämmer så skulle många med mig inte vara frälsta alls då. Jag blev nämligen döpt som barn, även om jag senare bad min pastor om att få bli döpt, också.
Svara - - 7/1-17 20:30 -
'barndop' aer Inte dop. Aeven maanga vuxendop aer tvivelaktiga. Endast en Troende, vars ande vittnar med Guds Ande, att han aer ett Guds barn + Gud, vet, om det aer ett Dop. Maanga vuxna blir nog bara Doppade. Kanske en pastor eller goda vaenner foereslagit dop efter laangvarigt medlemskap utan att personen verkligen faatt tro. I saa fall kan det kanske bli en del dopp innan Dopet.
Svara - - 7/1-17 21:41 -
Ingen blir frälst genom dopet, varken barndop eller vuxendop eller troendedop! Så det är sant att"många med mig är inte frälsta då". Frälst blir man endast då man tar emot den levande och uppståndne Jesus Kristus! Och när man är frälst då vill man också bli döpt!
Svara - - 7/1-17 22:32 -
Att döpa sig är att lämna det gamla livet och börja ett nytt med Jesus ett spädbarn kan inte välja. Precis som du säger Christer så blir man inte frälst av att döpa sig..... Jag förstår inte hur man kan läsa Bibeln så fel? När jag blev frälst så fick jag syndanöd och omvände mig...tog emot Jesus min Frälsare i mitt hjärta/liv och fick ett helt nytt liv med Honom SEN döpte jag mig och begravde mitt gamla liv.
Gud ser till våra hjärtan...det finns säkert barn som blir frälsta och vill döpa sig (min dotter blev frälst vid6år och blev döpt och andedöpt samma år) det måste vi respektera. Dopet frälser ingen!! Kram Gun.
Svara - - 8/1-17 07:24 -
Barndopet hindrar frälsningen.
Nej det gör det inte! (även om barndopet egentligen är felaktigt då barnet inte förstår vad frälsningen innebär) Löjlig diskussion!
Om man blir frälst som vuxen kan man antingen låta vuxendöpa sej (som en extra bekräftelse för sig själv) eller bara låta bli och "lita på sitt barndop".
För Gud spelar det NOLL (0) roll!
Svara - - 8/1-17 15:45 -
Många missuppfattar dopets innebör liksom man gör här. Dopet är instiftat av Gud o det tror jag de flesta håller med om. Dopet är till syndernas förlåtelse. Punkt slut. Genom omvändelsen då den kristna läran predikats och tagits emot genom tron så vill den nyräddade frälsta människan vända helt om mot köttets gärningar och följa Jesu väg. Detta har Gud uppmanat oss att följa genom att visa Gud och församlingen att vi menar allvar. Detta gör vi genom att låta vuxendöpa oss. Döper vi oss i Guds eget enda namn så följer också ett löfte som Gud lovat oss. Löftet är att personen SKA få den Helige Ande såsom gåva. Detta kände djävulen till och därför satte han in alla tänkbara resurser för ta bort dopet i Herren Jesu Kristi namn. Alltså hela det Gudomliga namnet som följt de troende genom gamla och nya testamentet. Djävulen visste också om och bävade då det utgår kraft från namnet Jesus Kristus. Vi ropar ju på Gud genom namnet Jesus. Första århundradet döptes alla kristna på detta viset enligt. APG 2:38-39 sen hade djävulen nästan helt utplånas denna dopformulering med titlar istället. Bibeln säger att vi ska åkalla Herrens namn vilket är Jesus och inte på något annat sätt.
Frid i Herren Jesu Kristi namn en Gud med ett namn. /lärjungen
Svara - - 8/1-17 18:35 -
Amen. ; den gamla syndakroppen saenks under vattnet (begraves med Kristus) och upp stiger sedan en syndfri,, ny skapelse i Kristus (upppstaar med Kristus). ; men om praesten/pastorn uttalar : .. doeper dig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn ??? ( efter ; Matt. 28 ; 20 )
Svara - - 8/1-17 20:41 -
Hur kan någon hinna gå förlorad före det att domen har avkunnats?
Svara - - 8/1-17 22:09 -
Lita på sitt barndop? ? Nej det ska man inte göra. Är man barndöpt, som jag , så hjälper det inte mig att bli frälst. När jag blev frälst fick jag en sån längtan att döpa mig. För att begrava den gamla människan och stiga upp som en ny skapelse I Jesus Kristus. Det spelar nog stor roll. Men Gud dömer ingen. Alla hinner inte döpa sig när dom omvänt sig , dom kommer säkert till himlen ändå. Men om man vet och känner och förstår vad Ordet säger: att man ska låta döpa sig, och ändå struntar i det eller annat då har man ju gått emot Guds Ord. Barndop frälser inte, troendedop frälser inte heller. Endast Jesus frälser. Men Jesus lät döpa sig. Skulle vi vara större än vår Herre. ?
Svara - - 9/1-17 23:39 -
Döpte mig efter påtryckningar på en Israelresa vid 11 års ålder. visst trodde jag på Jesus då, men jag tror inte jag hade tagit emot honom som min frälsare. Dethar jag däremot gjort i vuxen ålder. känns som att jag vill döpa mig igen för att det ska kännas på riktigt. är lite rädd för dop bara då det är en massa människor som tittar på en. vill döpa mig endast med en pastor/ präst och ev med andra som vill döpas(men inte med en hel församling som tittar) Är detta möjligt så svara den som vet.
Svara - - 9/1-17 23:58 -